ACACIA - NOOCEE WAA - SHARAXAAD IYO SAWIRO KALA DUWAN - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Acacia (Acacia) waa geed iyo geedo geedo ah oo ka mid ah qoyska legume, noocyo cagaar ah oo dhirta laga helo ayaa laga helaa in ay ku koraan dhammaan qaaradaha adduunka.
Warshadu waxay leedahay nidaam xidideed oo horumarsan, kaas oo quudinaya qoyaan iyo nafaqooyin xitaa goobaha koritaanka. Heerka geedku wuxuu gaari doonaa 14-30 m, iyo jeexitaanka geela ee gudaha girtigu wuxuu gaaraa 2 mitir. Jilifka geedo yar yar oo ah shimbir grayish ah ayaa noqda wakhti go'an, qaabkeeduna waxaa lagu dhejiyaa jeexjeexyada dheeraadka ah.
Caleemaha Acacia badanaa waxay u egtahay midabka, oo leh meeleyn kale oo ku taala petiole, oo laga bilaabo 7 illaa 21 rodol. Inta badan geedaha acacia waxay leeyihiin qodax fiiqan. Dhirta ayaa badanaa ku duugooba ubaxyada, shimbiraha ubaxyada cufan, caleemaha acacia - midab leh oo midab leh oo midab leh oo leh digir ah.
Dunida, waxaa jira in ka badan 500 nooc oo acacia ah. Ka fikir qaar ka mid ah noocyada ugu caansan ee acacia.
Ma taqaanaa? Geedka acacia ee qaangaarka ah wuxuu yeelan karaa dhexdhexaad ku salaysan 1 mitir.
Acacia cad (macdanta 'akacia common' robinia)
White acacia waa geed dhirta abaarta u adkaysata ama geed. Goobta dhalashada ee Robinia waa been abuur aan caadi aheyn - Waqooyiga Ameerika, laakiin waqti dheer beyacia caddaan ah ayaa si guul leh u daboolay suunka dhexe ee meeraha.
Noocan Robinia ah waxaa loo isticmaalaa dhirta ornamental, iyo sidoo kale ujeedada ciidda xoojinta iyo ilaalinta dabaysha. Been ah-Acacia Qoryaha Robinia waa mid adag, adkeysi leh, adkaysi u leh caajis, iyo sidoo kale leeyahay qurxoon iyo midab qurux badan, sifooyinka ay ka gaabsan tahay geedkii ama alwaax qoryo.
Waa muhiim! Qoryaha Akaciya cad waa lagu qiimeeyaa daroogada iyo cufnaanta iyada oo aan la jajabin, waa sahlan tahay in lakabyo, iyo sidoo kale muuqaalka qurxinta, taas oo waqti ka yar saamaynta nalalka qorraxda ayaa noqonaya mid ka duwan farqiga iyo iftiin.
Daraasad cusub oo laga helo duurjoogta waxaa laga helaa Waqooyiga Ameerika. Robinia gummy waxay leedahay qoyaan qaas ah oo caleemo ah, caws iyo koob, dhererka geedku wuxuu qiyaastii 10-12 mitir kula jiraa yar yar ilaa 40 cm dhexroor. Goobta midab madow, oo si fudud u taabto. Ubax ee acacia dhajis ah oo ku saabsan 2 cm ee size, casaan, waxaa lagu ururiyey burush qallafsan ee 7-15 ubax.
Robinia Cusub Mexican - geed ama geed 2-8 mitir sare, caleemaha, sida asalka nooca nooca acacia, waxaa lagu daboolaa naqshad jilicsan ee styloid grill. Caleemaha waxay ka kooban yihiin 9-15 qaybood oo caleen ah ilaa 4 cm oo dheer, ubaxu waa caddaan ama midab casaan oo midabkiisu yahay, 15-25 mm oo cabbirka.
Duurjoogta cusub, Gawaarida cusub ee Mexico ayaa ku kora waddamada Waqooyiga Ameerika - Texas, Colorado, iyo California.
Nacnac leh timo
Acacia-cidhiidhi ah waa geedka 1-3 m ee dhererka, kaas oo lagu faafiyo by suckers xididka. Muuqaalka muuqaalka noocan ah ee robinia waa in dhammaan qaybaha dhulka ee warshadu ay daboolaan naqshadaha midabka cas. Caleemaha waa ilaa 22 cm oo dheer waxayna ka kooban yihiin 7-13 wareega wareega illaa 6 cm oo cabbir ah. Ubaxyo yaryar oo dhar cad oo Robinia ah lilac ama midab madow.
Acacia cajiib ah
Akacia cajiibka ah, ama, sida lagu magacaabo, cajiib ah - waa geed dhererkiisu yahay 1.5 - 4 m oo leh dherer cagaar cagaaran yar yar. Inflorescence gogol-galka ayaa lagu sameeyaa ubaxyo jaale ah oo qumman oo cad oo yar yar. Ka dib markii ubax ah on acacia, barmooyinka dhuuban cidhiidhi ah waxaa la aasaasay dherer ilaa ilaa 16 cm abuur ah.
Noocyadaasi waxay ku badan yihiin Australia, Queensland iyo South Wales, halkaas oo inta badan lagu beeray.
Ma taqaanaa? Acacia waa warshad jilicsan oo cajiib ah, oo caan ku ah beekeepers. Malabka Acacia waa iftiin iyo hufan, hodan ku ah qaybaha kala duwan ee micro iyo macro.
Cuntada qalalan, ama miyir beeleed, waa geed cufan oo cufan leh oo dhererkiisu yahay 1-3 m. Waxaa lagu daboolay daboolida midab cagaaran (geedka ballaadhan oo kordhay, badalida waraaqaha caleenka caleen) ilaa 25mm dheer. Korniinka koritaanka wuxuu leeyahay qodxo - waa wax loo bedelay - tani waxay ahayd sababta sababta noocan oo kale ah nooca acacia loo yaqaan "hub".
Caleemaha Asymmetrical ee noocyada noocan ah ee acacia waa cagaar leh hooska silvery, qaabka qaabka umbipan leh dhamaadka xayawaanka. Blooms Bannaanka hore ee ubaxa leh ubaxyo dhalaalaya oo dhalaalaya oo isku dhajiya inflorescence gaar ah oo leh caraf udgoon leh. Caleemaha khafiifka ah ee acacia hubaysan ayaa kuu oggolaanaya inaad u isticmaasho sida dhir ampelous, kaas oo awood u leh inuu qurxiyo guri ama beerta.
Geedka acacia muddo dheer ayaa ah geed leh dherer ahaan 8-10 m, qaabka dabeecadda ee noocan ah waa kobaca xooggan - 5 sano oo kaliya ayaa geedku gaadho heer dherer ah oo kordha oo kaliya mustaqbalka. Caleenta cagaarshowga dheeriga ah waxaa ka mid ah midab cagaaran oo qurux badan, oo cidhiidhi ah, qaab cidhiidhi ah, oo leh dhammaatay. Ubaxyo cirro leh oo caleemo yar yar ah ayaa samaysanaya buraash karsan.
Noocani waa mid caadi ah Australia iyo qeybo ka mid ah Mareykanka. Ubax iyo beeraha abuurka ah ee dalalka qaarkood ayaa la cunaa, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in ay soo saaraan dhaylo.
Willow acacia waa dhir caddayn ah oo leh kor u fuulaan ilaa 8 mitir sare, goobta dhalashada ee dhirta waa Australia. Willow acacia ee duurjoogta ayaa sidoo kale ku kora Afrika iyo Bariga Dhexe. Magaca noocyada la helay ee isku midka ah ee la midka ah ee dhirta oo leh barwaaqo ooh.
Geedka ayaa si dhakhso ah u koraya, iyada oo aan qodnayn, laamaha geedka waa dhuuban, gogol dildillaac, hoos u dhig. Caleemaha dhaadheer iyo dheerba leh midab cagaaran oo qani ah, mararka qaarkoodna leh buluug. Waxaa ubaxyada ubaxyada leh ubaxyo jaale ah, oo markaa siinaya miraha midab madow.
Caragana treelike (acacia huruud ah)
Cagaarka jaalaha ah waa geed dherer leh 2-7 mitir, taas oo inta badan loo isticmaalo dabbaaldegga. Caleemaha Caragana waa geed sida, 8 cm oo dherer ah, oo ay sameeyeen dhawr lammaanood oo kala duwan oo ka mid ah qaybaha maqaarka ee warqadaha. Ubaxku wuxuu dhacaa dhamaadka guga oo leh ubaxyo jaale ah, oo u ekaa dhicin-qaababka dhismadooda. Ubaxa waa weyn, hal ama samee farabadan 4-5 gogo '.
Laga soo bilaabo sanadguurada afaraad ee nolosha, geedkan wuxuu soo saaraa midhaha - bir ah digir ilaa 6 cm dheer oo leh abuur yar yar. Nooca Caragana waa dabaysha oo adkaysi u ah, jiilaalka-adag iyo ma aha mid madaxbannaan ciidda iyo qoyaanka. Cagaarka huruudda ah ee dabiiciga ah wuxuu ku koraa Siberia, Altai, Kazakhstan iyo Georgia.
Ma taqaanaa? Qoryaha Acacia wuxuu ku habboon yahay kuleylka, maxaa yeelay waxay si fiican u gubtay waxayna siinaysaa kuleyl badan.
Acacia Red waa geedo toosan ama faafaya, si cad u daboolay caleemo yaryar calaamad yar oo xididada dheera ee dheer. Heerka acacia gaduudku waa qiyaastii 1.5 - 2 mitir.
Cagaarshaha cas ee gaduudka laga bilaabo Julaay ilaa Oktoobar oo ah ubaxyo halbeeg ah ama tufts oo ah laba ama saddex qaybood oo ka soo baxa axils of caleemo geed. Midabka ubaxa - laga bilaabo midabada iftiinka qorraxda iyo iftiinka iftiinka ah ee jaalaha ah. Xilliga dayrta, dhirta cidhiidhiga ah ee cidhiidhiga waxaa la aasaasay illaa 10 cm oo dheer oo leh miraha. Nooc nooca acacia jecel yahay carrada ciidda.
Cagaarshow Shacabka waa jeexan jeexan oo dhererkoodu gaari karo 10 m. Leaves waa cawl-cagaar, illaa 5 cm dheer, diyaariyo laba-jajab oo ay weheliyaan asaasiga ugu muhiimsan, waxaa ku jira qanjirro qafiif ah oo qumman oo gaaban ah oo leh dhoobo. Ubaxa Acacia waa dal, qallafsan, dhalaalaya oo huruud ah, oo waxay u urayaan sida isku dar ah violets iyo raspberries.
Laga soo bilaabo midabada nooca acacia noocan oo kale ah waxay saliid noqotaa, taas oo si weyn loogu isticmaalo qurxinta iyo qurxinta. Shirkadda 'choppedia' ayaa lagu kori karaa halbeeg yar. Noocyadaasi waxay ku koraan dhulka Hindiya, iyo sidoo kale meelaha ku yaal dhulalka ciriiriga iyo dhulalka kulaylaha.
Crimean, ama, sida loo yaqaan 'Lekoran acacia, albaabada', waa geed ciriiri ah oo dhererkiisu sarreeyo ilaa 12 mitir iyo barkin ka badan 3 m ee girth. Caleemaha waa qallayl, furfurnaan, cagaar iftiin ah, ilaa 20 cm oo dheer, oo badanaa ka kooban 14 qaybood oo kala duwan oo awood u leh inay habeenkii ama kulaylka u kiciyaan. Noocaan nooca acacia ah ubaxyada leh ubaxyo udgoon oo udub ah oo ka kooban silsilado khafiif ah oo cad oo casaan ah kaas oo sameeya farabadan qalafsan.
Kala duwanaansho ee jasiiradda jasiiradda waa jeex, kaas oo lagu kori karo geedka guriga. Noocani waa mid aad u diirran oo abaaro u adkaysta, si fiican u koraa meelaha iftiimiya.
Ma taqaanaa? Acacia waxay socotaa ilaa 100 sano iyada oo xaalado kobcin leh.
Dhirta geedka "acacia" waa geed ama geedka 0.5 - 8 mitir. Nidaamka asaasiga ah waa mid awood leh, oo leh xidid dheer oo u oggolaanaya in uu soo saaro qoyaanka xaaladaha lamadegaanka. Goobta iyo laamaha - midab madow, adigoo riixaya taabashada. Caleemaha waxay leeyihiin qaab dhismo adag, oo dhexda qadafka dheer waxaa jira laba caleemo oo cagaaran oo cagaaran, jeexjeexan leh lakabyo jilicsan.
Ubax ka mid ah midabka cufan ee cufan leh oo leh xarun huruud ah, dhammaadka guga foomka inflorescences yar-yar oo qaabab ah. Xilliga xagaaga, miraha khudradda waxay u muuqdaan kuwo u egyihiin sida dusha sare ee fiilooyinka.
Xiddiga qulqulka ayaa ku kora kalluumeysiga iyo lamadegaanka, wuxuu u dulqaadanayaa heerkulka sare iyo la'aanta waraabka. Wadamada Central Asia, acacia waxaa loo isticmaalaa in lagu xoojiyo ciidda ciidda.
Akacia lacagta waxaa sidoo kale loo yaqaannaa mimosa. Tani waa geed geedo ah oo tufaaxa ah oo taajir dallad ah. Qalabka acacia caadi ahaan wuxuu gaaraa dherer ahaan 10-12 m.
Ballaajada foosto waa qiyaastii 70 cm, oo leh daar aad u buuran oo duban oo leh dildilaacyo dheer. Nidaamka asaasiga ah ee noocan ah ee acacia waa gacangelin, horjeeda dallacan. Wuxuu ka tagaa illaa 20 cm oo dheer, khafiif ah, ka kooban qaybo farabadan oo khafiif ah, yar yar oo ku jira timo cufan.
Ubaxa - qurux badan oo huruud ah oo jaale ah oo leh dhexroor ah 5-8 mm, kaas oo sameeya xabadaha qarxa-inflorescences. Muddada ubaxu waxay bilaabmaysaa xilliga qaboobaha dabayaaqada guga. Miro of acacia lacagta waa barko brown-eggplant ah ilaa 20 cm dheer oo leh abuur abuur adag.
Silver acacia waxay noo timid Australia, halkaas oo ay ku koraan duurka.
Geedka "acacia" waa geedka ilaa 7 mitir, laakiin mararka qaarkood waxay kor u kici kartaa. Jilifku waa mid siman, midab madow. Laamihii waxaa lagu daboolay tiro adag oo adag. Caleemaha waa dherer dheer, dhalaalaya oo cagaaran, qaab dhismeed adag, oo ay sameeyeen dhowr qaybood oo caleemo leh oo caleemo leh.
Blossoms ubaxyada ubaxyada ubaxyada dhexdhexaad ah oo leh midabka lilac iftiin iyo ur aan lahayn. Muddada ubaxu waa muddo dheer, waxay socotaa ilaa dhammaadka Sebtembar. Homeland acacia pink ayaa loo yaqaan 'North America'.
Acacia waxay ka soo korodhay dalal badan qarniyo badan, waxay leedahay taariikh dheer, oo lagu duubay sheekooyinka iyo caqiidooyinka, waxaa loo adeegsaday xafladaha diimeed ee qarniyadii dhexe iyo cuduro kala duwan. Maalmahan, acacia waxaa loo isticmaalaa baahida najaarida, dhakhaatiirta dhaqameedku waxay u isticmaalaan ubax ujeedooyin daaweyn, geedo xoog badan oo qurxiya magaalooyinka oo soo saara qadar badan oo oksijiin ah jawiga, iyo qabsashada dhirta ayaa u oggolaanaysa in meel kasta laga koro.